Atletico Madrid oo diyaar u ah inay Antoine Griezmann ka iibiso Barcelona haddii ay heleyso 19-sano jir ka tirsan kooxda… – Gool FM
(Madrid) 22 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa la soo warinayaa inay diyaar u tahay Antoine Griezmann ka iibiso Barcelona, haddii ay heleyso fursadda ay ku la soo saxiixan karto Joao Felix oo ka tirsan Benfica.
Xiddigan xulka qaranka Portugal ee da’doodu ka hooseyso 21-sano jirrada ayaa ku raaxaysanaya olole qurux badan oo uu ku qaadanayo Estadio da Luz waxaana ay kaga mahad celinayaan 24 gool iyo caawin oo uu sameeyey kooxda reer Portugal.
Sida ay sheegayaan wararka ka soo baxaya Portugal, kooxda Atletico Madrid ayaa qorsheynaysa inay la soo saxiixato 19-sano ikraan Felix kaasoo heshiiskiisa lagu burburin karo adduun dhan 104 milyan oo gini, waxaana markaas ay u ogolaan doontaa Griezmann inuu u dhaqaaqo Barca.
Barcelona ayaa doonaysa inay la wareegto xiddigan xulkiisa qaranka Faransiiska ku guuleystay Koobka Adduunka 2018, kaasoo heshiiskiisa lagu burburin karo adduun dhan 200 milyan oo gini.
Dhinaca kale kooxda Bayern Munich ee ka dhisan dalka Jarmalka ayaa sidoo kale doonaysa saxiixa laacibkaan waxaana ay rabtaa inay soo qaadato Griezmann dhammaadka xilli ciyaareedkan.